Mitohy ny Famoretana an-Kerisetra ao amin’ny Repoblika Demaokratikan’i Congo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2018 21:56 GMT
Goma, Nord Kivu, RD Congo : ampaham-bondrona Fitondra-tena sy Fitsipi-pifehezan'ny MONUSCO manofana mpampiofana Afrikana-Tatsimo amin'ny fisorohana ny herisetra sy fihoarana ara-nofo. Saripikan'ny MONUSCO/Alain Wandimoyi CC-BY-20
Tamin'ny 11 marsa lasa teo ity vaomiera ity no nandrisika ny governemanta” hanaisotra ny fandraràna ankapobeny tsy hivory sy hanao fihetsiketsehana ankalamanjana ary “hanome amin'ny Fitsarana ny fitaovana rehetra ahafahana mampanao fanadihadiana ara-pitsarana sy hanenjehana ireo mpanitsakitsaka ny zon'olombelona mifandraisaka amin'ireo fihetsiketsehana ankalamanjana tamin'ny 31 desambra 2017 sy tamin'ny 21 janoary 2018 ireo.”
Mihamahazo vahana ny fanoherana
Raha heverina ho mpiara-dalana ara-tantara amin'i Kabila i Paul Kagamé, filohan'i Rwanda, dia mihasarotra ho an'ireo Afrikana mpitondra ny firenena ankehitriny ny fanohanana azy. Maro tamin'ireo namana mahazatra an'i RDC no nisintaka tamin'ny fitondrana (kôngôley). Azo tononina amin'izany i Zimbabwe, i Angola, i Afrika Atsimo na i Botswana. Na dia miha-mitoka-monina aza i Kabila, dia tsy mihevitra ny hiala amin'ny fitondrana. Toe-draharaha mampanahy ireo mpamakafaka maro, izay manahy fa hilentika ao amin'ny kizo politika ny firenena.